Tabtii aad u noolaan laheyd | KEYDMEDIA ONLINE
Waa hubanti aan hubo, idinkuna hubtiin in Biyuhu yihiin asaaska nolosha, waa midda qur’aankeenna kariimka ah ku xusan ”Wa jacalnaa minal maa’i kulla shay’in xayyin”. Biyuhu, waxay kaligood kaafiyaan dhirta. Dhirtuna waxa ay isu rogtaa baad la quuto. Baadkuna waxa uu kaaliyaa biyaha si noolaha kale u noolaado.
Xuseen M. Cabdulle ”WADAAD”